नेमार सर्वाधिक महंगा खेलाडी, मूल्य २०६.५ मिलियन पाउन्ड | News Nepal
>>घारिलो हतियार प्रयोगबाट अज्ञात समूहद्वारा आमाछोरी गम्भीर घाइते, सांसद रोकाको पहलमा हेलिकप्टरबाट उद्धार
>>प्रधानमन्त्री ज्यू ! केहि मान्छे धाबा बोल्न थाले गुठी विधेयक स्थगित गराैंः योगेश भट्टराई
>>जहाज वेच्ने आकासमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा मिल्दैन, युरोपमा नेपाली जहाज छिट्टै उड्नेछन्ः प्रधानमन्त्री
>>रसुवागढी नाकामा ४ किलो सुनसहित नेपाली नागरिक पक्राउ
>>सातै प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै, कुन प्रदेशका कस्ता प्राथमिकता ?
नेमार सर्वाधिक महंगा खेलाडी, मूल्य २०६.५ मिलियन पाउन्ड
एजेन्सी । ब्राजिलका स्टार नेमार संसारकै मूल्यवान् खेलाडी भएका छन्। हालैको एक अध्ययनले २६ वर्षीय नेमारलाई महँगो खेलाडीको सूचीमा राखेको छ। फुटबल बेन्चमार्क डटकमले अडिटर्स कम्पनी केपीएमजीसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले नेमारलाई सर्वाधिक मूल्यवान् खेलाडीको पहिलो सूचीमा राखेको हो। नेमारको मूल्य २०६.५ मिलियन पाउन्ड रहेको छ।
नेमारपछि दोस्रो स्थानमा फ्रान्सेली युवा स्टार केलियन एमबाप्पे रहेका छन्। तेस्रो स्थानमा अर्जेन्टिनाका स्टार एवं बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी छन्। एमबाप्पेको मूल्य १९३.१ मिलियन पाउन्ड रहेको छ। मेसीको मूल्य १८३.२ मिलियन पाउन्ड छ।
यसैगरी महँगा खेलाडीको शीर्ष १० मा इङ्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने खेलाडीको वर्चस्व छ। फुटबल बेन्चमार्कका अनुसार १५१.६ मिलियन पाउन्ड मूल्य रहेका लिभरपुलका मोहमद सलाह चौथो, १४८.२ मिलयन पाउन्ड मूल्य रहेका इडेन हाजार्ड पाँचौं, १३६.१ मिलियन पाउन्डसहित टोट्टनहामका कप्तान हेरी केन छैटौं र १२९.४ मिलियन पाउन्डसहित केभिन डे ब्रुुयन सातौं स्थानमा छन्।
शीर्ष १० मा रहने अन्य खेलाडीमा पाउल पोग्वा, एन्टोइन ग्रिजम्यान र फिलिप काउटिन्हो रहेका छन्। पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने शीर्ष १० भित्र अटाउन सकेका छैनन्। १२औं स्थानमा रहेका रोनाल्डोको मूल्य ९६.४ मिलियन पाउन्ड मात्रै छ।
संसारकै महँगा खेलाडीको सूचीमा रहेका नेमार दुई वर्षअघि स्पेनिस महारथी बार्सिलोना छाडेर फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) गएका थिए। तर, नेमार पीएसजीमा त्यति नरमाएको समाचार बाहिरिएको थियो। उनी पछिल्लो समय बार्सिलोना फर्कन चाहेको र एजेन्टमार्फत सल्लाह गरिरहेको हल्ला पनि चल्न थालेको छ।
बर्सिलोनाका कप्तान मेसीले हालै मात्र पूर्वसहकर्मी नेमार बार्सिलोना फर्किएको हेर्न आफू आतुर रहेको बताएका थिए। मेसीले हालै क्रिसमस बिदामा स्पेनिस पत्रिका मार्कालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नेमारको बार्सिलोना फिर्तीबारे खुलासा गरेका थिए। पहिला नेमार मेसीको छायामा परेका कारण पीएसजी गएको समाचार पनि बाहिर आएको थियो।
अहिले आएर नेमार पीएसजीमा खुसी नरहेको र बार्सिलोना फर्कन एजेन्टमार्फत सल्लाह गरिरहेको समाचार आएका छन्। मेसीले नेमारको बार्सिलोना फर्कने सम्भावना बारे भनेका छन्– ‘नेमार बार्सिलोना फर्कन सक्नेछन्। त्यो प्रक्रिया भने निकै कठिन हुुनेछ। उनी फर्किऊन् भन्ने हामी सबै चाहन्छौं। यहाँको ड्रेसिङ रुम र लकरले समेत नेमारलाई सम्झिरहेको छ जस्तो लाग्छ।’
मेसीले नेमार र आफू एकदम मिल्ने साथी भएको र महत्वपूर्ण क्षण सँगै बिताएको पनि बताए। बार्सिलोनाले नेमारलाई फर्काउन चाहे पनि पीएसजीले उनलाई सजिलै छाड्नेमा त्यति विश्वास भने गरिएको छैन।
प्रकाशित मिति : 2019-01-11
प्युठानको झिमरुकको वडा नम्बर ८ द्वारा खेलकुद सामाग्री वितरण
प्युठान । जिल्लाको झिमरुक गाउपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालयले बालबालिका लागि खेलकुद सामाग्री वितरण गरेको छ । वडा नम्बर ८...
फिफा वरियतामा नेपालको ४ स्थान खस्कियो !
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सर्वोच्व निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल ४ स्थान तल झरेको छ । फिफाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल ४ स्थान...
रुकुम पूर्वमा गुरिल्ला ट्रेल यहि असार २ बाट हुने
रुकुम पूर्व । तत्कालिन माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको जनयुद्धको क्रममा प्रयोग गर्ने गरेको गुरिल्ला ट्याकमा यहि असार २ गते...
सर्वाधिक राशीको पाँचाैँ चितवन च्याम्पियनशिप कप जेठ २४ बाट
काठमाडाैँ ।चितवन भरतपुरमा ‘पाँचाैँ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता’ २४ जेठदेखि ७ असारसम्म हुने भएको छ । सोमबार एभरेस्ट क्लब चितवनले पत्रकार सम्मेलन...
रंगशालाको विवाद मिल्यो, स्थानीयबासी आफै जुटे भत्काइको बार बनाउन
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिरहेको धर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन र स्थानीयबीच सहमति भएको छ । सहमति लगतै भरतपुर...
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य तत्काल स्थगितः धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन
काठमाडौं– निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य तत्काल रोकिएको छ । बुधबार केही स्थानीयले निर्माणाधीन रंगशालाको सुरक्षाका लागि बारिएको...
रकम उठ्न सके पुसभित्रै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ : धुर्मुस
चितवन । रामपुरमा निर्माण गर्न थालिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा पुसबाट प्रतियोगिता गर्न सकिने गरी कामलाई अघि बढाइएको छ। धुर्मुस–सुन्तली...
मनमोहन यू-१६ राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि प्रदेश २ लाई
काठमाडौं । मनहमोहन मेमोरियल यू-१६ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश २ ले जितेको छ । मंगलबार भएको फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिमलाई...
स्पेनिस ‘ला लिग’को उपाधि मेस्सीको गोलले बार्सिलोनाको पोल्टामा
काठमाडौं । बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार राति आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको खेलमा लेभान्टेलाई १-०...